Ny paradisa mpizahatany any Indonezia Bali dia niditra am-baravarana mihidy henjana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Indonezia » Ny paradisa mpizahatany any Indonezia Bali dia niditra am-baravarana mihidy henjana
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao farany momba ny Indonezia • Vaovao • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Indonezia izao dia miatrika ny iray amin'ireo valanaretina coronavirus ratsy indrindra any Azia, mitaky tranga maherin'ny 20,000 isan'andro isan'andro tato anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Ny praiminisitra Joko Widodo dia nanambara ny fanidiana vaovao vaovao ny zoma lasa teo, izay haharitra hatramin'ny faran'ny volana jolay, na dia azo hitarina aza.
Ny hery iraisana dia antenaina hahazoana antoka fa hihazakazaka mahomby ny fanidiana ary hahatratra ny tanjona kendrena.
Ny hery iraisana dia misy polisy 21,000 sy miaramila 32,000.
Araka ny filazan'ny tompon'andraikitra ambony amin'ny polisy, ny governemanta Indonezia dia manaparitaka polisy miisa 53,000 amin'ny fameperana vonjimaika ny vondrom-piarahamonina vonjy maika (fantatra amin'ny anarana hoe PPKM) izay napetraka tany Java sy Bali tamin'ny 3 ka hatramin'ny 20 Jolay.
Nilaza ny inspektera jeneraly Imam Sugianto fa ny tafika iraisana dia misy polisy 21,000 sy miaramila 32,000.
Ny hery iraisana dia antenaina hahazoana antoka fa hihazakazaka ny PPKM vonjy maika ary hahatratra ny tanjona kendrena, hoy hatrany i Sugianto.
Sakan-dalana sy toeram-pisavana an-jatony no natsangana nanerana an'i Indonezia satria nanandrana nampihatra fanidiana mahery vaika ny fitondrana mba hifehezana ny fiparitahan'ny COVID-19, izay nirongatra teto amin'ny firenena tato anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Ny hetsika dia tonga taorinan'ny nanambaran'ny filoha Joko Widodo fanidiana vaovao tamin'ny zoma lasa teo, izay haharitra hatramin'ny faran'ny volana jolay, na dia azo hitarina aza. Ny baiko dia mitaky ny orinasa rehetra «tsy ilaina» hanidy varavarana, raha toa kosa ny mpianatra monina Java sy Bali dia mila mianatra any an-trano raha azo atao. Nakatona koa ny valan-javaboary, magazay, trano fisakafoanana anaty trano ary toeram-pivavahana, ankoatry ny toerana hafa.
Indonezia izao dia miatrika ny iray amin'ireo valanaretina coronavirus ratsy indrindra any Azia, mitentina tranga maherin'ny 20,000 12 isan'andro isan'andro - betsaka ny mino fa nifandray tamin'ny Delta variant hita voalohany tany India - ary izany ihany no kaonty voamarina tamin'ny fitsapana. Ny firenena dia namotika ny rakitsoratry ny aretina isan'andro isan'andro tao anatin'ny 25,830 andro farany, hoy ny Reuters, mitatitra tranga 539 tamin'ny zoma, ary XNUMX ny isan'ireo maty.
nomena BaliNy lazan'ny mpizahatany sy ny toerany ho ivon-toekarena, ny ezaka fanaovana vaksiny dia nifantoka betsaka tamin'ny nosy, izay manodidina ny 71% amin'ireo mponina no vita vaksiny hatreto. Tao anatin'ny fitsangatsanganana vao tsy ela akory izay - nahatratra 200 isan'andro isan'andro - dia nikatona ho an'ny fizahan-tany iraisam-pirenena ny nosy, ao anatin'izany ny mpitsangatsangana vaksiny, izay teratany Indoneziana sy ireo manana fahazoan-dàlana manokana ihany no afaka mankany. Izy io dia mirehareha amin'ny mponina manodidina ny 4.3 tapitrisa.